Imikhankaso ye-Coke PR Izame Ukuthonya Ukubukwa Kwentsha Ngemithelela Yezempilo yeSoda - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Posted on December 18, 2019 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoLwesithathu, Disemba 18, 2019
Ngemininingwane engaphezulu Xhumana: Gary Ruskin, +1 415 944-7350
Imibhalo yangaphakathi yeNkampani yeCoca-Cola ikhombisa ukuthi le nkampani ihlose kanjani ukusebenzisa imikhankaso yezobudlelwano nomphakathi ukuheha ukuqonda kwentsha ngengozi yezempilo yemikhiqizo yayo, kufaka phakathi i-sugary soda, ngokusho kocwaningo olushicilelwe namhlanje kwi-International Journal of Environmental Research kanye Nempilo Yomphakathi.
One Umbhalo weCoca-Cola kukhombisa ukuthi imigomo yayo yomkhankaso wobudlelwano bomphakathi ifaka phakathi "Ukwandisa amaphuzu ezempilo omkhiqizo we-Coke nentsha" kanye "Nokuthembeka kwesamente endaweni yezempilo nenhlalakahle."
Ucwaningo lukhiqizwe iDeakin University yase-Australia kanye ne-US Right to Know, umthengi ongenzi nzuzo neqembu lezempilo lomphakathi. Kususelwa kuzicelo ezimbili zobudlelwano bomphakathi zeCoca-Cola zeziphakamiso, ze Imidlalo ye-Olimpiki yasehlobo yase-Rio 2016 futhi nge Umkhankaso we-Movement Is Happiness. I-US Right to Know ithole imibhalo ngezicelo zamarekhodi womphakathi.
"Le mibhalo ikhombisa ukuthi uCoca-Cola wazama ukusebenzisa ubudlelwano nomphakathi ukukhohlisa intsha ukuthi icabange ukuthi i-soda enoshukela iphilile, kanti lokhu kukhulisa ubungozi bokukhuluphala, isifo sikashukela nezinye izifo," kusho uGary Ruskin, ongumbhali wesifundo. , kanye nomqondisi obambisene ne-US Right to Know. "Izinkampani zikagwayi akufanele zitshele intsha ukuthi yini enempilo noma engaphilile, kanjalo neCoca-Cola."
"Sifuna ohulumeni nezinhlaka zezempilo zomphakathi ukuthi ziphenye ukuthi iCoca-Cola ibusebenzisa kanjani ubudlelwano bomphakathi ukuphatha izingane nentsha ngezindlela ezingalimaza impilo yazo," kusho uRuskin.
Ucwaningo luphetha ngokuthi, “Inhloso kaCoke kanye nekhono lakhe lokusebenzisa imikhankaso ye-PR ukumaketha ezinganeni kufanele kubangele ukukhathazeka okukhulu kwezempilo yomphakathi, uma kubhekwa ukuthi ukuvezwa kwezingane ekumaketheni kokudla okungenampilo kungenzeka kube nomthelela obalulekile ekukhuleni kwamazinga okukhuluphala kwengane . ”
“Emhlabeni jikelele, iCoke yenza izethembiso zomphakathi zokunciphisa ukuvezwa kwezingane ekukhangiseni ngemikhiqizo engenampilo. Kodwa abakushoyo emphakathini kuphambene nemibhalo yabo yangaphakathi ekhombisa ukuthi bazimisele kanjani ngamabomu ukukhomba izingane njengengxenye yemizamo yabo yokwenyusa izinga ”, kusho omunye wababhali balolu cwaningo, Hlanganisa uSolwazi Gary Sacks waseDeakin University.
Ucwaningo oluku-International Journal of Environmental Research and Public Health lwabhalwa ngokuhlanganyela nguBenjamin Wood, umfundi owenza izifundo zobudokotela eDeakin University; UGary Ruskin, umqondisi obambisene ne-US Right to Know, kanye noProfesa Gary Sacks waseDeakin University.
The ukhiye amadokhumenti ocwaningweni ziyatholakala naku- Ingobo yomlando Yemibhalo Yezimboni Zokudla we Umtapo Wezincwadi Wezimboni ze-UCSF, In the Iqoqo le-USRTK Yezimboni Zokudla.
Ukuthola eminye imininingwane nge-US Right to Know, bheka amaphepha ethu ezifundo ku https://usrtk.org/academic-work/. Ngemininingwane ejwayelekile, bheka usrtk.org.
Umsebenzi Wezemfundo, Izifo Ezihlobene Nokudla, Ukumaketha Kwezingane, Ukukhishwa Kwezindaba, Uphenyo lwethu, Abathandekayo